फेसवुकका कारण फूलकुमारीले पाइन नयाँ जीवन ! - Purbeli News
फेसवुकका कारण फूलकुमारीले पाइन नयाँ जीवन !
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २८, २०७४ समय: ९:३७:१६
झापा २८, भदौ । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकलाई कतिले दुरुपयोग गरेका छन् भने कतिले त्यसैलाई सदुपयोग गर्दै विभिन्न सामाजिक काममा उपयोग गर्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगकै कारण कतिपय जेल जीवन बिताउन बाध्यछन् भने कतिपय समाजमा धन्यवादको पत्र बन्ने गरेका छन् । वाह्रदशी गाउँपालिका वाड नम्वर – ७ निवासी आर्थिक रुपले अति विपन्न एक क्यान्सर पीडित युवतीलाई उपचारका लागि खर्च जुटाएर रोग मुक्त बनाउने सोही ठाउँका टोम राजवंशीसहित तुलसीप्रसाद राजवंशी,गोपालचन्द्र राजवंशी, कुवित राजवंशी, श्याम राजवंशी समाजका उदाहरणीय पात्र बन्नुभएको छ । आन्द्रमा क्यान्सर भएर आर्थिक अभावले मृत्युसंग छटपटाई रहेकी फूलकुमारी राजवंशीको उपचारका लागि रकम जुटाएर सहयोग पु¥याएपछि उहाँहरु समाजका उदाहरणीय पात्र बन्नुभएको हो । फूलकुमारीको उपचारका लागि फेसवुकबाटै २ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्थिक संकलन गरेको र सोही रकमबाट उनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भएको थियो । उपचारपछि फूलकुमारीले नयाँ जीवन पाएकी छिन् ।
छोरीको जीवन बचाइदिन आग्रह गर्दै फूलकुमारीका वुवा शेषलाल राजवंशीले हारगुहार गरेसंगै राजवंशी समाज विकास समिति झापाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहनुभएका टोमले युवाको सक्रियतामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘फूलकुमारी बचाउ अभियान’ सञ्चालन गर्नुभएको थियो । सो अभियानबाट जुटेको रकमले फूलकुमारीको उपचार गराएको र उनले नयाँ जीवन पाएकी हुन् । उनको उपचारका लागि नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीले आर्थिक सहयोग गरेका थिए । नवील बैंकमा २११००१७५०३६४० नम्वरको खाता खोलेर उनीहरुले आर्थिक संकलन गरेका थिए ।
सहयोग पाएपछि फूलमायाको क्यान्सरको शल्यक्रिया गरेर अहिले उनलाई घरमा ल्याइएको छ । सवैको सहयोगमा नयाँ जीवन पाएपछि फूलकुमारीका वुवा आमा मात्र होइन अहिले डाँगीवारीवासी हर्षित छन् । सवैको स – सानो सहयोगलेपनि क्यान्सर जस्तो रोग निको पारेर छोरीले नयाँ जीवन पाएको भन्दै उनका वुवा शेषलालले सहयोग गर्ने सवैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।
सामाजिक कार्य गर्न रुचाउने राजवंशीले यस अघिपनि आर्थिक रुपमा अति विपन्न परिवारका लागि सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो । राजवंशीले फेसवुक मार्फत चलाएको अभियानका कारण आफ्नो विद्यार्थीले नयाँ जीवन पाएको भन्दै गौरीशंकर माविका प्रधानाध्यापक लेखनाथ कटुवालले अभियानकर्तालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । छोरीको जीवन बचाइदिन हारगुहार गर्दै फुलकुमारीका वुवा हामीकहाँ सहयोग माग्न आउनुभएको थियो , हाम्रो एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन तर अहिले उनी जाति भएर घर आएको सुन्दा हामीमा खुशीको सिमा नै रहेन प्रधानाध्यापक कटुवालले भन्नुभयो ।
शेषलाललाई रुन्चे हासो
सबैको सहयोगमा छोरी फूलकुमारीले नयाँ जीवन पाएको प्रति शेषलाल अति खुशी खुशी हुनुहुन्छ । खुशीसंगै उहाँमा पीडापनि उत्तिकै थपिएको छ अहिले । २०६६ सालमा विरिङ खोलामा आएको बाढीले उहाँको परिवारलाई विस्थापित गरेको थियो । भएको जग्गा जमिन कटान गरेर बगरमा परिणत गरिदिएपछि उहाँ अहिले अर्कैको जग्गामा फुसको छाप्रो हालेर आश्रय लिएर बस्नुभएको छ । आश्रय लिएको ठाउँमा पनि साउनको अन्तिमसाता आएको वढीले क्षति पु¥यायो । जतिवेला उहाँ छोरीको उपचारका लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो ,त्यत्तिनै वेला शेषलालको घरमा बाढीले क्षति पु¥यायो । वाढीले क्षति पु¥याएरपछि उहाँ अहिले छिमेकीको शरणमा परेर पानी समेत अर्कैको ट्युवेलमार्फत खानुहुन्छ । भएको फुसको घर पनि बस्न नमिल्ने भएको छ । न त उहाँको घरमा ओढ्ने छ, न त ओच्याउने नै । वाढीका कारण घरमा भएको सवै सामग्री नष्ट भएपछि कष्टकर जीवन बिताउन वाध्य छ शेषलाल र उहाँको परिवार ।
दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवीको पार्जन गर्दै आएको राजवंशी परिवारको अहिले न त घरमा खाने अन्न छ न त शौचालय नै । जनमजदुरी गरेर परिवार पाल्दै थिए, छोरी विरामी भएपछि उनको उपचारका लागि अस्पताल बस्ता खाने अवस्था नै रहेन– शेषलालले भन्नुभयो । छोरीको सफल उपचारपछि घर फर्कनु भएका शेषलाल छोरीले पाएको नयाँ जीवन प्रति खुशी भएपनि बस्ने घर नै नभएपछि उत्तिकै चिन्तित हुनुहुन्छ ।